Tag: lalànan'ny media sosialy | Martech Zone
Tag: lalànan'ny media sosialy
Asabotsy 7 Febroary 2015 Sabotsy 28 Novambra 2015 Douglas Karr
Nandritra ny fikarohana nataoko momba ilay boky, sendra io vanja volamena kely mahafinaritra io aho avy amin'ny bilaogy efamira Shift Communication PR… torolàlana 10 ho an'ny media sosialy ambony. Navoak'izy ireo tany izy io ary tsy mila fanondroana na inona na inona ho an'ny fampiasana ara-barotra. Torolàlana 10 ambony indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny haino aman-jery sosialy ao amin'ny [Company] Ireo torolàlana ireo dia mihatra amin'ny mpiasa na orinasa (orinasa) izay mamorona na mandray anjara amin'ny bilaogy, wiki, tambajotra sosialy, tontolo virtoaly, na karazana haino aman-jery sosialy hafa. na
Tsy tiako ny teny hoe "fitsipika" raha ny resaka Marketing amin'ny Social Media, saingy mino aho fa manana traikefa sy fanadihadiana tranga ampy hahafantarana izay tena nanaovan'ireo orinasa asa lehibe amin'ny fampiasana media sosialy izahay ary tena notsofina. Ity infographic ity dia manao asa mahafinaritra amin'ny fametrahana fanantenana sy torolàlana vitsivitsy momba ny fampivoarana ny paikadin'ny media sosialy. Toy ny zavatra hafa rehetra, misy ny lalàna tsy voasoratra tafiditra amin'ny varotra media sosialy. Ny olon-drehetra
Raha efa ela no namakianao ity bilaogy ity dia fantatrao fa mankahala fitsipika aho. Mbola tanora dia tanora tokoa ny media sosialy ka toa mbola tsy tonga aloha ny fampiharana lalàna. Ireo olona ao amin'ny FastCompany dia manangona amboaran-torohevitra vitsivitsy ary miantso azy ireo hoe Fitsipiky ny haino aman-jery sosialy. Ity infographic ity dia fanangonana ireo fitsipika navoaka tao amin'ny fanontana tamin'ny septambra an'ny magazine. Mbola tsy hiantso ireo fitsipika ireo toa ahy aho
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia fantatsika tanteraka fa sarotra ny manova ny fihetsiky ny olona. Iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra azonao andramana atao izany. Izany no antony ananan'i Google, amin'izao fotoana izao, ny fahombiazan'ny fikarohana hatrany, satria efa zatra "Google it" ny olona rehefa mila mahita zavatra amin'ny Internet izy ireo. Fantatro izany, nahaliana ahy ny isan'ny olona hitako tao amin'ny Twitter sy bilaogy milaza amin'ny hafa